I-CEDAR MULCH PROS KUNYE NE-CONS - IZITIYA KUNYE NOKUHLALWA KOMHLABA
Eyona izitiya Kunye Nokuhlalwa Komhlaba I-Cedar Mulch Pros kunye ne-Cons
I-Cedar Mulch Pros kunye ne-Cons
Nasi isikhokelo sethu somsedare we-mulch pros and cons kubandakanya indleko kunye nokusetyenziswa okuthandwayo kwigadi yasekhaya. I-mulch yomsedare luhlobo oluthandwayo lwe-mulch oluqukethe iziqwenga zegxolo kwimithi yemisedare. Sisimbozo somhlaba sendalo esingama-100% esinentabalala yesibonelelo segadi okanye ukulungiswa komhlaba.
Isebenziselwa ntoni iCedar Mulch?
Imisebenzi yeCedar Mulch
Ukuvela kweCedar Mulch
I-mulch yokuPhendula izinambuzane
Umthi weCedar Mulch
Isifo okanye ukubola
I-mulch iqhekeza okanye iqhekeza iinkuni. I-mulch inokwenziwa ngomthi womthi, ipayini straw, i-moss, iziqwenga zengca okanye amagqabi. I-mulch ixhaphake kakhulu ngokwenziwa kwezinto ze-organic kodwa ngamanye amaxesha yenziwa kwezinye izinto.
Ezinye zezinto ezingaqhelekanga ezisetyenziswayo zezi: umgquba, irabha, umgquba okanye amaphephandaba. I-mulch isetyenziswa ngokuxhaphakileyo njengomaleko ophezulu emhlabeni ukunika bobabini ubuhle obutsha kunye nomgangatho osebenzayo kulungiso lomhlaba.
I-mulch yemisedare ngokukodwa yenye yeentlobo eziphezulu ze-mulch. Umsedare yenye yeentlobo eziqhelekileyo zemithi esetyenziselwa i-mulch. I-mulch yomsedare ilungile kuzo zombini i-aesthetics egadini kunye nokusebenza kwayo.
I-mulch yomsedare isetyenziselwa ukugubungela umhlaba kwaye ibonelele ngokugquma komhlaba, ukugcinwa kwamanzi, ukuthintela ukhula, kunye nokugxotha izinambuzane.
Ixabiso lentengo yokuzibandakanya kwendlela
I-mulch yomsedare isetyenziswa ngokujikeleze iziseko zemithi emikhulu okanye i-shrubbery kunye neenxa zonke iibhokisi zeentyatyambo kunye neebhedi zokutyala.
Ngokusekwe kwindawo ongathanda ukuyibeka kule mulch inokutshintsha uhlobo ngqo lwe-mulch yomsedare oyikhethileyo. Kwizityalo ezikhulu ezinje ngamatyholo okanye imithi, ukusikwa kwemisedare kungcono kakhulu ukuba kusetyenziswe njenge mulch.
Xa kuziwa kwientyatyambo ezincinci kunye nezityalo i-mulch ingcono kwi-shredded ukuze kubekho ukukhanya okukhanyayo kwi-mulch mulch.
Enye yezona zinto zibalaseleyo malunga ne-mulch yemisedare kukuba zikusindisa kubunzima bokhula. Indlela yokuqala encediswa kakhulu ngulo msedare kukuba ikhusela umhlaba ekuqokeleleni imbewu kokhula. Ngale ndlela awubagqumi nje, ziyinyani nje ukuba azisakhuli.
Ukongeza, i-mulch inika isithintelo elangeni, nto leyo efunekayo kwimbewu ukuze ibe lukhula, ngaphandle kwalonto akusayi kubakho lukhula, nokuba imbewu incinci ingene.
I-mulch ngokubanzi yindlela elungileyo yokugcina umhlaba umanzi ixesha elide. Uhlobo ngalunye lwe-mulch lunempawu ezahlukileyo ekulunge ngakumbi ukugcina amanzi omhlaba ongezantsi.
Ukongeza i-mulch yomsedare ngaphezulu komhlaba kunika umqobo phakathi komhlaba kunye nomoya, okwenza kube nzima ukuba amanzi asemhlabeni abe ngumphunga.
Oku kunika isityalo amanzi amaninzi emhlabeni ngaphandle kokuba sizinkcenkceshele rhoqo. I-mulch yemisedare ikwabonelela ngokhuseleko emoyeni, enokuthi ibambe amanye amanzi afuna izityalo.
Enye into ebalulekileyo malunga ne-mulch kukuba isebenza njengobushushu obulawula ingubo. Kwiinyanga ezishushu kunceda izityalo ukuba zihlale zipholile kwaye ebusika zinceda ukuba izityalo zihlale zifudumele.
Okunye rock iingoma utata intombi iingoma
Kungenxa yokuba i-mulch yemisedare ihlala phezu komhlaba kunye neengcambu zikhusela elangeni eligqats 'ubhobhoyi, okanye kwiqabaka ngamanye amaxesha.
Ukugquma okunikezelwa ngumsedare kunika umhlaba kungasindisa ubomi bezityalo ukuba bubushushu obuguquliweyo. Oku kwenza i-mulch ibe ngumbono olungileyo intlango yomhlaba .
I-mulch yomsedare inomtsalane kakhulu; inokucoca ukhuko lweentyatyambo kwaye yenze ukuba yonke indibano ihambe kunye. Kukho iitoni zombala owahlukileyo onokufumana kuwo umthi womsedare, ukuvumela ukuba ukhethe ubugcisa obafunayo kwigadi yakho.
Ukongeza i-mulch yemisedare ayifihli kuphela ukhula kunye nokungcola, kodwa idala ukucoceka okufanayo ngokujonga umhlaba wonke.
isoftware yoyilo lwedama
I-mulch yomsedare ilungile ekugxothweni kwe-bug kuba ukhuni lomsedare ngokwendlela yendalo lunalo mgangatho.
Umthi womsedare umelana neentsholongwane kunye nezinye izinambuzane, ezinokugcina ezinye zezityalo zakho ngaphandle kokusebenzisa i-pesticides eyingozi. Gcina ukhumbule ukuba ayizizo zonke izinambuzane ezingafunekiyo, kodwa umsedare ugxotha uninzi lwezinambuzane.
Kubalulekile ukuba ungabeki i-mulch yemisedare yonke indlela ukuya esiqwini okanye kwizikhondo zemithi kunye namatyholo. Kuba i-mulch yomsedare ilungile ekugcineni amanzi kunokubangela ukunqongophala komoya nge-mulch eninzi yokutyhala amanzi kwisiseko sezityalo.
Oku kunokubangela ukuba umthi okanye i-shrub igule okanye ibangele ukubola kwesityalo. Oku kunokuthintelwa ngokulula ngokushiya umsantsa phakathi kokuphela kwesigcina-kufuma kunye nesiseko semithi oyifunayo kunye namatyholo.
Ngawo onke amahla ndinyuka aselwandle omsedare akwicala eliphezulu xa kufikwa kwixabiso le-mulch. Ngethamsanqa inokugcina ngexesha kunye nemali ekuhambeni kwexesha nazo zonke iimpawu zayo ezifanelekileyo.
I-mulch esemgangathweni isebenza malunga ne- $ 15- $ 30 kwiyadi nganye, ngelixa i-mulch yomsedare ixabisa malunga ne- $ 30- $ 40 kwiyadi nganye.
Eli xabiso linokunyuka kwakhona ukuba ufuna iinkuni zidaywe okanye iichips zisiwe kwaye zifakelwe wena. Ezi ndleko zinokongeza kwiimeko apho ufuna indawo enkulu egqunywe ngomthi womsedare.
Ngelixa ukugxotha izinambuzane kukwicandelo lobuchwephesha, inokuthi ivelise umba wokuba iphinde igxothe iibugs eziluncedo ezinokufuneka ukugcina umyezo wakho wonwabile kwaye usempilweni. Ezinye iintyatyambo zidinga umvumvuzelwano okanye zixhamle kwizakhamzimba ezinikwa zizinambuzane ezithile.
izipho zekrisimesi zomfazi wakho
I-mulch yomsedare yiplanga elinuka kamnandi kwaye linokuchaphazela abanye abantu abanezinto ezithile, ngelixa uninzi lonwabela ivumba kubalulekile ukuba ukwazi oku ukuba nabani na otyelele eli khaya okanye indawo anokufumana ukungavisisani nevumba.
Ngaba i-Cedar Mulch ilunge ngakumbi kune-Mulch yesiqhelo?
I-mulch yemisedare yenye yezona zinga liphezulu le-mulch, iyenza ukuba ibe ngcono kancinci kunezinye iintlobo ze-mulch kwintengiso.
Ukugxotha izinambuzane kunye nokubonakala kwezi mpawu zibalulekileyo zibeka umsedare ngaphandle kwezinye izixwexwe. Oko kuthethiweyo, kuyakubakho ukonyuka kwamaxabiso okuba yeyona mulch iphezulu.
Intsingiselo kwezinye iimeko kunokubakho uhlobo olungcono lwe-mulch onokuyisebenzisa kwiprojekthi ethile. Njengoko kukhankanyiwe malunga ne-mulch esemgangathweni imalunga nesiqingatha sexabiso le-mulch yomsedare.
Ukufumana ezinye izimvo ezinxulumene nesembozo somhlaba ndwendwela igalari yethu kwi iintlobo zegrabile Apha.
ngowuphi umnwe umsesane wokuzibandakanya onxitywe
yenza isaphetha esineribhoni
Iingoma zomdaniso katata-ntombi
ukuphakama kwentonga esemgangathweni
iingoma ezili-100 zomdaniso womtshato
izimvo zegumbi lokuhlambela elingaphantsi